घर किन्न कुन बैंकले कति ब्याजदरमा दिन्छन् ऋण ? (ब्याजदर सहित) » aarthikplus
घर किन्न कुन बैंकले कति ब्याजदरमा दिन्छन् ऋण ? (ब्याजदर सहित)
काठमाडौँ । मानिसको आधारभूत आवश्यकता मध्ये आवास पनि एक हो । अहिलेको जमानामा त झन् यो आधारभूत आवश्यकता मात्र नभएर सामाजिक प्रतिष्ठा र व्यक्तिको उपलब्धी र आत्मसन्तुष्टिको पनि स्रोत बन्न थालेका छन् ।
यसै कुरालाई मध्यनजर गर्दै विश्वभरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले मानिसहरूको यो आवश्यकता पूर्ति गर्न सहज बनाउने हेतुका साथ आवास कर्जा उपलब्ध गराउने गरेका छन् । नेपालमा पनि विभिन्न बैैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आवास कर्जा उपलब्ध गराउँदै आएका छन् ।
नेपालमा वाणिज्य बैंकदेखि लिएर विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूले ग्राहकलाई आवास कर्जा उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । यसका अलावा सहकारीहरूले पनि यो सुविधा उपलब्ध गराउने गरेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिने आवास कर्जाको ब्याजदरमा भने भिन्नता रहेका पाइन्छ ।
बैंकले दिने कर्जामा ब्याजदर उसको ‘कष्ट अफ फन्ड’ कति छ भन्ने कुरामा पनि भरपर्छ । बैंकको ‘कष्ट अफ फन्ड’ बढी भएमा उसको आधारदर (बेसरेट) पनि बढी हुन्छ र कर्जाको ब्याजदर पनि बढी हुन्छ । यसैगरी, बैंकको आधारदर (बेस रेट) कम भएका कर्जाको ब्याजदर पनि कम हुन्छ ।
कुनै पनि वित्तीय संस्थाले आधारदरमा शून्य प्रतिशतदेखि बढीमा ६ प्रतिशतसम्म प्रिमियम जोडेर ब्याजदर निधारण गर्ने गरेका छन् । सामान्यतः पुराना र ठूला बैंकहरूको ब्याजदर कम हुने गर्छ भने नयाँ र साना (विकास बैंक र वित्त कम्पनी) बैंकहरूले ब्याजदर तुलनात्मक रुपमा बढी हुने गर्छ ।
त्यसैले सामान्य पाठकहरूलाई कुन बैंकबाट आवा कर्जा लिँदा सस्तो पर्छ भन्ने जानकारी दिनका लागि हामीले यहाँ नेपालका हाल संचालनका २७ वटा वाणिज्य बैंकहरूको आवास कर्जाको ब्याजदरको सूची यहाँ प्रस्तुत गरेका छौं ।
कुन बैंकले कतिमा दिन्छन् घर कर्जा ?
मानिसको आधारभूत आवश्यकता मध्ये आवास पनि एक हो । अहिलेको जमानामा त झन् यो आधारभूत आवश्यकता मात्र नभएर सामाजिक प्रतिष्ठा र व्यक्तिको उपलब्धी र आत्मसन्तुष्टिको पनि स्रोत बन्न थालेका छन् । यसै कुरालाई मध्यनजर गर्दै विश्वभरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले मानिसहरूको यो आवश्यकता पूर्ति गर्न सहज बनाउने हेतुका साथ आवास कर्जा उपलब्ध गराउने गरेका छन् ।
नेपालमा पनि विभिन्न बैैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आवास कर्जा उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । नेपालमा वाणिज्य बैंकदेखि लिएर विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूले ग्राहकलाई आवास कर्जा उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । यसका अलावा सहकारीहरूले पनि यो सुविधा उपलब्ध गराउने गरेका छन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिने आवास कर्जाको ब्याजदरमा भने भिन्नता रहेका पाइन्छ । बैंकले दिने कर्जामा ब्याजदर उसको ‘कष्ट अफ फन्ड’ कति छ भन्ने कुरामा पनि भरपर्छ ।
बैंकको ‘कष्ट अफ फन्ड’ बढी भएमा उसको आधारदर (बेसरेट) पनि बढी हुन्छ र कर्जाको ब्याजदर पनि बढी हुन्छ । यसैगरी, बैंकको आधारदर (बेस रेट) कम भएका कर्जाको ब्याजदर पनि कम हुन्छ ।
कुन बैंकले कतिमा दिन्छन् घर कर्जा ? ग्लोबल आईएमई बैंक : ग्लोबलले ७.९९ प्रतिशत ब्याजदर विशेष घर कर्जा योेजना ल्याएको छ ।
यस स्कीम अन्तर्गत १५ वर्ष अवधिसम्मका लागि अधिकतम १ करोड ५० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा उपलब्ध गराइने बैंकले जनाएको छ ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक : पूर्ण सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक सबैभन्दा कम बेसरेट भएको वाणिज्य बैंक हो । यसले ५.४१ आधारदरमा १.५० देखि २ प्रतिशतसम्म प्रिमियम जोडर ५ वर्षसम्मका लागि घर कर्जा दिन्छ ।
यस्तै, १० वर्षसम्मका लागि २ देखि २.५ प्रतिशत र १५ वर्ष सम्मका लागि २.५ देखि ३ प्रतिशत प्रिमियम जोडेर होमलोन उपलब्ध गराउने बैंकले जनाएको छ ।
हिमालयनले घर कर्जा ९.७५ प्रतिशत ब्याजदरमा दिइरहेको छ । बैंकले ६.७५ प्रतिशत बेसरेटमा २ देखि ३ प्रतिशत प्रिमियमजोडेर ८.७५ देखि ९.७५ प्रतिशत ब्याजदरमा सेवाग्रहीलाई घर कर्जा दिँदै आएका छ ।
कृषि विकास बैंक :
यस बैंकले घर कर्जा अन्तर्गत आधारदरमा ५ प्रतिशतसम्म प्रिमियम जोडेर अधिकतम १२.१३ प्रतिशतसम्ममा घरकर्जा मा ऋण उपलब्ध गराइरहेको जनाएको छ । बैंकको बेसरेट भने ७.१३ प्रतिशत रहेको छ ।
यस बैंकको आधारदर ५.७३ प्रतिशत रहेको छ । बैंकले ५ वर्षसम्मको आवास कर्जाको लागि ९.८५ प्रतिशत, १० वर्षसम्मका लागि ११.९ प्रतिशत र १० वर्षभन्दा बढी अवधिका लागि १२.४९ प्रतिशत ब्याजदरमा घर कर्जा प्रदान गर्छ ।
प्रभु बैंक :
यस बैंकले घर कर्जाको लागि आधारदर ६.८८ प्रतिशतमा ५ प्रतिशत प्रिमियम जोडेर ११.८८ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराइरहेको छ । बैंकले विभिन्न अवधिको ब्याजदरमा पनि प्रिमियम भने समान कायम गरेको छ ।
लक्ष्मी बैंक :
यस बैंकले घर कर्जाका लागि आधारदरमा ५ प्रतिशतसम्म प्रिमियम जोडेर अधिकतम् १२.८ प्रतिशतमा ऋण दिने गरेको छ । बैंकको आधारदर ७.८ प्रतिशत रहेको छ ।
नबिल बैंक :
नबिल बैंकले पनि आधारदरमा ५ प्रतिशतसम्म प्रिमियम जोडेर घर कर्जा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । बैंकको आधारदर ५.८६ प्रतिशत रहेको छ । बैंकले ३५ वर्षसम्मका लागि ५ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा उपलब्ध गराउने जनाएको छ ।
सिद्धार्थ बैंक :
यस बैंकले घर कर्जाको लागि प्रिमियम सहित १२.१६ प्रतिशत ब्याजदर तोकेको छ । बैंकको आधारदर ७.१६ रहेको छ भने प्रिमियम ५ प्रतिशतसम्म जोडिने बैंकले जनाएको छ । ११.कुमारी बैंक : ७.९० प्रतिशत आधारदर रहेको यस बैंकबाट घरर्जाको लागि ७ प्रतिशत प्रिमियम जोडेर १४.९० प्रतिशत ब्याजदरमा सेवाग्रहीले ऋण लिन सक्नेछन् ।
सनराइज बैंक :
यस बैंकले ५ वर्षसम्मको लागि प्रिमियम सहित १०.५० प्रतिशत, ५ देखि १० वर्षका लागि ११ प्रतिशत र १० देखि १५ वर्षका लागि ११.५ प्रतिशतमा घर कर्जाको लागि ब्याजदर तोकेको छ ।
एभरेष्ट बैंक :
एभरेष्टले ५.९९ प्रतिशत आधारदरमा २ देखि ५ प्रतिशतसम्म प्रिमिय जोडेर घर कर्जा दिन्छ । बैंकले ७ वर्षसम्म ९.९९ प्रतिशत, १० वर्षसम्मका लागि १०.९९ र १० वर्षभन्दा माथिको लागि ११.९९ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गरिरहेको छ ।
सानिमाले आधारदरमा ५ प्रतिशतसम्म प्रिमियम जोडेर आवास कर्जा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । बैंकको आधारदर ६.३४ प्रतिशत रहेको छ ।
एनसीसी बैंक :
यस बैंकको आधारदर ७.५७ प्रतिशत रहेको छ । यसले पनि ४ प्रतिशतसम्म प्रिमियम जोडेर घर कर्जा दिने गरेको छ । साथै, बैंकले ९.५ देखि ९.५८ प्रतिशत स्थिर ब्याजदरमा पनि घर कर्जा दिने गरेको छ ।
एनएमबी बैंक :
यस बैंकले घर कर्जाको लागि आधारदरमा १ देखि ५ प्रतिशतसम्म प्र्रिमियम जोडेर सेवाग्रहीलाई ऋण उपलब्ध गराइरहेको जनाएको छ । बैंकको आधारदर ७.३३ प्रतिशत रहेको छ ।
नेपाल एसबीआइ बैंक :
यस बैंकले ३ वर्षसम्मका लागि घरकर्जाको ब्याजदर १२.५ प्रतिशत तोकेको छ । यस्तै, ३ देखि ५ वर्षसम्मका लागि १३.५ प्रतिशत र ५ देखि १० वर्षका लागि १४ प्रतिशत र सोभन्दा माथिको लागि १४.५ प्रतिशत ब्याजदर तोकेको छ । बैंकको आधारदर ७.३८ प्रतिशत रहेको छ ।
यस बैंकको आधारदर ५.५४ प्रतिशत रहेको छ । यसले पनि ५ प्रतिशतसम्म प्रिमियम जोडेर साढे १० प्रतिशतसम्म कर्जा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । मेगा बैंक :आधारदरमा ५ प्रतिशतसम्म प्रिमियम जोडेर बैंकले घरकर्जा प्रवाह गरिरहेको छ । यस बैंकको आधारदर ७.६१ प्रतिशत रहेको छ ।
माछापुच्छे« बैंक :
यस बैंकले घर कर्जाको लागि ५ वर्षसम्म ९.८९ प्रतिशत ब्याजदर तोकेको छ । ५ देखि १० वर्षसम्मको लागि १०.८९ प्रतिशत र त्योभन्दा माथिको लागि ११.८९ प्रतिशत ब्याजदर तोकेको छ ।
सिभिल बैंक :
घर कर्जाको लागि सिभिल बैंकले एनआइसी एशिया बैंक : एनआइसीले आधारदर ६ प्रतिशतसम्म प्रिमियम जोडर घर कर्जा दिने गरेको छ । बैंकले न्यूनतम ७.९९ प्रतिशतदेखि अधिकतम ८.५ प्रतिशतसम्ममा घर कर्जा उपलब्ध गराउँछ । बैंकको बेसरेट ६.८४ प्रतिशत रहेको छ ।
सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल :
यस बैंकले घरकर्जाको लागि अवधि अनुसार ब्याजदर तोकेको छ । बैंकले ५ वर्षसम्मको लागि १०.५ प्रतिशत र सोभन्दा माथि १२ प्रतिशत सम्म ब्याजदर तोकेको छ । यस्तै बैंकको आधारदर ७.८४ प्रतिशत रहेको छ ।
बैंक अफ काठमान्डु :
यस बैंकको आधारदर ७.४४ प्रतिशत रहेको छ । घर कर्जाको लागि बैंकले ५ प्रतिशतसम्म प्रिमियम थपेर आउने ब्याजदरमा सेवाग्राहीलाई कर्जा दिइरहेको छ ।
प्राईम कमशियल बैंक :
यस बैैंकले आधारदरमा ५ प्रतिशतसम्म प्रिमिया जोडेर ५ देखि २० वर्षको लागि १० देखि ११ प्रतिशत ब्याजदरमा घर कर्जा दिने गरेको छ । बैंकको आधारदर ७.२१ प्रतिशत रहेको छ ।
नेपाल बंगलादेश बैंक :
यस बैंकले आधारदरमा ५ प्रतिशतसम्म प्रिमियम थपेर घर निमार्णका लागि ऋण उपलब्ध गराउँदै आएको जनाएको छ । बैंकको आधारदर ७.४१ प्रतिशत रहेको छ ।
स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक :
५ वर्षका लागि बैंकले ९.७५ प्रतिशत ब्याजदर तोकेको छ । यस्तै ५ देखि ७ वर्षसम्मका लागि १०.७ प्रतिशत, १० वर्षसम्मका लागि ११ र सोभन्दा माथिको लागि १२.२५ प्रतिशत ब्याजदर तोकेको छ । बैंकको आधारदर ५.५१ प्रतिशत रहेको छ
ग्लोबलले ७.९९ प्रतिशत ब्याजदर विशेष घर कर्जा योेजना ल्याएको छ । यस स्कीम अन्तर्गत १५ वर्ष अवधिसम्मका लागि अधिकतम १ करोड ५० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा उपलब्ध गराइने बैंकले जनाएको छ ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक :
पूर्ण सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक सबैभन्दा कम बेसरेट भएको वाणिज्य बैंक हो । यसले ५.४१ आधारदरमा १.५० देखि २ प्रतिशतसम्म प्रिमियम जोडर ५ वर्षसम्मका लागि घर कर्जा दिन्छ । यस्तै, १० वर्षसम्मका लागि २ देखि २.५ प्रतिशत र १५ वर्ष सम्मका लागि २.५ देखि ३ प्रतिशत प्रिमियम जोडेर होमलोन उपलब्ध गराउने बैंकले जनाएको छ । हिमालयन बैंक :
सानिमाले आधारदरमा ५ प्रतिशतसम्म प्रिमियम जोडेर आवास कर्जा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । बैंकको आधारदर ६.३४ प्रतिशत रहेको छ । एनसीसी बैंक : यस बैंकको आधारदर ७.५७ प्रतिशत रहेको छ । यसले पनि ४ प्रतिशतसम्म प्रिमियम जोडेर घर कर्जा दिने गरेको छ । साथै, बैंकले ९.५ देखि ९.५८ प्रतिशत स्थिर ब्याजदरमा पनि घर कर्जा दिने गरेको छ ।
माछापुच्छ्रे बैंक :
५ वर्षका लागि बैंकले ९.७५ प्रतिशत ब्याजदर तोकेको छ । यस्तै ५ देखि ७ वर्षसम्मका लागि १०.७ प्रतिशत, १० वर्षसम्मका लागि ११ र सोभन्दा माथिको लागि १२.२५ प्रतिशत ब्याजदर तोकेको छ । बैंकको आधारदर ५.५१ प्रतिशत रहेको छ ।
साधना लघुवित्तको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा रेशम न्यौपानेको...
वि.सं.२०७८ भदौ २५ शुक्रवार १९:१२
गोरखा । साधना लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा...
२ खर्ब विदेशी लगानी ५२ देशबाट नेपाल...
वि.सं.२०७८ भदौ २५ शुक्रवार १७:५४
नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआइ) भित्रिने क्रम वर्षेनी बढ्दै गएको...
पूर्वएआईजी नै नेटवर्किङ धन्दामा, पूर्वएआईजीको सहित यी...
वि.सं.२०७८ भदौ २४ बिहीवार ११:१८
वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले नेटवर्किङ कारोबार गरिरहेका...
३९ स्थानमा सहुलियत पसल संचालन, १० रुपैयाँसम्म...
सरकारले चाडपर्वलाई लक्षित गर्दै असोज १ गतेदेखि देशभरका विभिन्न ३९...